Maanta oo kale madaxweyne Aaden Cadde ayaa xilkii wareejiyey markii laga adkaaday – Somali Integration Tv
Maanta oo kale maxaa dhacay?
Maanta oo kale madaxweyne Aaden Cadde ayaa xilkii wareejiyey markii laga adkaaday
Maanta oo kale maxaa dhacay?Wararka Maanta
Allaah u naxariiste Aadan Cadde iyo C/rashiid Cali Sharmaarke oo isku gacan qaadaya.
10-kii juunyo sanadku markuu ahaa 1967-dii, waxaa xilka madaxweyne-nimo si dimoqradiyad ku jirto uga adagay aabihii dimoqraadiaydda Afrika ee Aaden Cabdulle Cismaan Aaden Cadde.
Markii looga adkaaday doorashadii dhacday xilligaasi wuxuu mudane Aadan Cadde durba ka dagay kursigii isagoo aan marnaba isku adkeyn. Soomaaliyana ka dhigay dalkii ugu horeeyey ee Afrikaan ah gaartay dimoqraadiyad aad loo soo dhaweeyey.
Allaah u naxariistee Aaden Cadde wuxuu ahaa geesi ay soomaalida ku xusuusan doonto maamul wanaag ku saleeysan wadaniyad iyo karti hufan. Wuxuuna dalkiisa hooyo si nabad ah ugu noola tan iyo intii auu geeriyooday.
DARAASAD: Dalka Faransiiska oo “hal malyan” oo qof ay joojiyeen sigaarka
Hogaamiye-yaasha Kuuriyadda Waqooyi iyo Mareykanka oo kulan taariikhi yeeshay